Mobile Legends Season အပြီး: Season 19 အပြီးမှာ သင်ဘယ် Rank ရရှိခဲ့ သလဲ? | Codashop Blog MM
Mobile Legends Season အပြီး: Season 19 အပြီးမှာ သင်ဘယ် Rank ရရှိခဲ့ သလဲ?
Mobile Ledgends ရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် Action တွေပြည့်နှက်နေတဲ့ Season ကို နှုတ်ဆက်ဖို့ အချိန်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ Season 19 က မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပြီး တစ်ခြားအရာတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ S20 ကို ထိုနေ့တစ်ရက်ထဲမှာဘဲ စတင်လိုက်ပါတယ်။
Mobile Legends မှာ Season ၁ ခု တိုင်းက ၃လကြာပါတယ်။ Season အသစ်တစ်ခုစတိုင်း အတော်ဆုံးကစားကမားတွေရဲ့ ဂိမ်းထဲက Mail box ထဲကို Reward တွေအများကြီးထည့်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ယခင် Season က အမြင့်ဆုံး Rank ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး Season အသစ်မှာ ဘယ် Rank က စတင်လဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
Season 19 က ပြန်ပြောသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ပြန်ပြောကြည့်လိုက်ရအောင်။ Seaon အသစ်မှာ Rank ကျတာတွေက ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုလည်း သင့်ကို ရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။ ဒီတော့ Season 20 မှာ သင်ဘယ် Rank ကစတင်ရမလဲဆိုတာကို မှန်းထားလို့ ရတာပေါ့။ ပြီးတော့ အလွန်မိုက်တဲ့ Reward အကြောင်းတွေလည်းပြောပြပါမယ်နော်။ ကဲ စလိုက်ရအောင်!
Hero အသစ်တွေ။ Mobile Legend မှာ Season အသစ်စတိုင်း လူတွေကို စိတ်၀င်စားစေတာကတော့ Hero အသစ်တွေ အမြဲထွက်တာပါဘဲ။ Battlefield ထဲကို Skill အသစ်တွေယူဆောင်လာလို့ လူတွေက စိတ်၀င်စားကြတာပါ။
Season 19 မှာ လက်၀ှေ့သမား စူပါစတား Manny Pacquiao ကို ကိုးကားပြီး ပြုလုပ်ထားတဲ့ လက်၀ှေ့သမား Hero ကတော့ Paquito ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းရဲ့ အစပိုင်းမှာ အရမ်းအသုံး၀င်ပြီး အရမ်းတော်တယ်လို့ သက်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ Zhask ရဲ့​ရန်သူ ဂြိုလ်သား Mege Yve လည်းပါပါတယ်။ Land of Dawn မှာ ကျွန်တော်တို့ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ တစ်ကယ့် အပြင်လောက ကခြယ်လှယ်မှုနဲ့ Damage တွေပေးနိုင်တာက သူမရဲ့ ထူးခြားတဲ့ Skill တစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခြား သိသင့်သော အရာများ။ ကစားသမားတွေကို အလွန်ပျော်ရွှင်စေခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး Hero တွေနဲ့ Skill အကြီးကြီးတွေ အသုံးပြုခွင့်ရသွားတဲ့ The Grand Mayhem Event လဲလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်အသင်း Bren Esport က မြန်မာရဲ့ အသင်း Burmese Ghouls ကို ၇ ဂိမ်းမှာ အနိုင်ရရှိသွားတဲ့ M2 World Championship လဲကျင်းပဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Seaon Rank ကျမှု နှင့် Reward များ
ကစားသမားတွေရဲ့ Rank တွေက Seaon အသစ်ဖြစ်တဲ့ S20 မှာ ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းအမေးများတဲ့ မေးခွန်းကတော့ သင်ဘယ် Rank ကို ရောက်သွားမှာလဲ? နောက်လာမဲ့ Season အသစ်မှာ သင်ဘယ်မှာ ရပ်တည်မယ်ဆိုတာ ဒီပေါ်မှာ မူတည်လို့ပါ။
Seaon တစ်ခုပြီးတိုင်း MLBB ကစားသမားတွေက ဘာကို စိတ်အလှုပ်ရှားဆုံးလဲဆိုရင် Seaon ပြီးတိုင်းရတဲ့ Reward တွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Rank မြင့်မြင့်ရောက်လေ ပိုကောင်းတဲ့ Reward တွေရလေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ In-Game Mail မှာ ရရှိတဲ့ Reward တွေကို ကြည့်ရှုဖို့ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
Akai အသုံးပြုတဲ့သူတွေ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ပါပြီ။ Master ကနေ Mythic ထိရောက်တဲ့ ကစားသမားတွေကတော့ S19 ရဲ့ Exclusive Skin တွေဖြစ်တဲ့ Akai’s Street Enforcer ကိုရရှိမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး ပန်ဒါလေးက အမိုက်စား ၀တ်စုံတွေ၀တ်ပြီး Skill Effects တွေကို တွေ့ရမှာပါ။
Season 20 မှာသင်ဘာကို စောင့်မျှော်သလဲ?
Season 20 အတွက် Land of Dawm မှာ Hero အသစ်တွေ Event အသစ်တွေ နဲ့ နောက်ထပ် စွန့်စားခန်းတွကိုတွေ့ဆုံဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါ။
Hero အသစ် – Beatrix ။ လက်နတ် ၄ မျိုးပြောင်းလည်းနိုင်တဲ့ Marksman Beatrix ရောက်လာမှာကို ပရိသတ်တွေက စောင့်မျှော်နေပါတယ်! Beatrix က Meta အသစ်ဖြစ်မလား? ဒါမှမဟုတ် သူ့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ Skill တွေကြောင့် ချက်ချင်း Ban တဲ့ စရင်းထဲကို ရောက်သွားမလား? Battlefield ပုံစံကိုသူဘယ်လိုပြောင်းလည်းလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရအောင်။ Beatrix က မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ကနေ စတင်ရရှိမှာပါ။
Season 20 ရဲ့ ပထမဦးဆုံး၀ယ်ယူမှု။ သင့်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး Assassin ဖြစ်တဲ့ Saber Mains မှာ Skin အသစ်တွေရရှိမှာပါ။ Saber ရဲ့ Silver Edge ကတော့ Season 20 အတွက် ပထမဦးဆုံး ၀ယ်ယူမှုဖြစ်လာမှာပါ။ သင် စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီလား?
Codashop နဲ့ Mobile Legends Diamond တွေကိုတွေဖြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့အုန်းနော်။ ပိုမိုမြန်ဆန် စိတ်ချရပြီး ငွေပေးချေမှု မျိုးစုံကို ရွေးချယ်နိုင်လို့ အပူအပင်ကင်းတဲ့ ဂိမ်းကစားမှုကိုရရှိဖို့ အာမခံပါတယ်။
Previous articleVALORANT Episode2Act II: New Agent Astra and Prime 2.0 Bundle တွေခုဘဲရရှိတော့မှာပါ
Next articleလုံခြုံစွာ ဂိမ်းကစားမှု – ဂိမ်းကစားသူများ နှင့် မိဘများအတွက် လမ်းညွန်